Sabtida masiixiga, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Sabtida Christian waa nolosha ku dhex jirta Ciise Masiix oo rumayste kasta uu ku helo nasasho run ah. Sabtiga toddobaad ee toddobaadlaha ah ee reer binu Israa'iil lagu amro ee Tobanka Amar waxay ahaayeen hooska tilmaamaya Rabbigeenna iyo Badbaadiyeheenna Ciise Masiix oo ah astaan ​​run ah. (Cibraaniyada 4,3.8-10; Matayos 11,28-30; Baxniintii 2-20,8; Kolosay 11-2,16)
U dabbaaldeg badbaadada Masiixa
Cibaadadu waa jawaabtayada ficilada nimcada leh ee Eebbe noo yeelay. Waayo, reer binu Israa'iil, bixitaankoodii, waaya-aragnimadii ka soo bixitaanka Masar, waxay ahayd xarunta cibaadada - wixii Ilaah iyaga ku sameeyey. Masiixiyiinta, injiilku waa udub dhexaadka caabuda - waxa Eebbe u sameeyay rumaystayaasha oo dhan. Cibaadada masiixiga waxaan ku dabaaldegnaa oo aan wadaagno nolosha, dhimashada iyo sarakicidda Ciise Masiix badbaadada iyo badbaadada dadka oo dhan.
Qaabka loo caabudo ee reer binu Israa'iil loo siinayo ayaa si gaar ah loogu haystay. Ilaah wuxuu reer binu Israa'iil siiyay Muuse qaab cibaado leh oo ka caawin kara reer binu Israa'iil inay u dabaaldegaan oo ay uga mahadnaqaan Ilaah wax kasta oo Ilaah u sameeyey markii uu ka keenay Masar oo keenay dalkii loo ballanqaaday.
Cibaadada masiixiga uma baahna dawo qoritaan iyadoo lagu saleynayo khibradaha Axdiga Hore ee Israa'iil ee Ilaah, laakiin waxay ka jawaab celinayaan injiilka. Sidoo kale, waxaan dhihi karnaa "khamriga cusub" ee injiilka waa in loo buuxiyaa "tuubooyin cusub" (Matayos 9,17). “Tubbada qadiimka ah” ee axdigii hore looma loogu talagalin inay nuugto khamriga cusub ee injiilka (Cibraaniyada 12,18: 24).
Cibaadada reer binu Israa'iil waxay u ahayd reer binu Israa'iil. Waxay socotay illaa Masiixu yimid. Tan iyo markaas, dadka Ilaahay waxay cibaadadooda u muujiyeen habab cusub, iyagoo ka jawaabaya waxa ku jira - waxyaalaha cusub ee aan ka badnayn ee Ilaah ku sameeyay Ciise Masiix. Cibaadada masiixiga waxaa loogu talagalay ku celcelinta iyo ka qeyb qaadashada jirka iyo dhiigga Ciise Masiix. Qaybaha ugu waaweyni waa:
Dabaal degidda Cashada Rabbiga, sidoo kale Eucharist (ama mahadnaqid) oo loogu yeedhay wadaagid sida Masiixu ina faray.
Akhrinta Qorniinka: Waxaan dib u fiirineynaa oo aan dib u fiirineynaa xisaabtanka jacaylka Eebbe iyo ballanqaadyadiisa, gaar ahaan ballanqaadka Badbaadiyeheenna Ciise Masiix, kaasoo innaga quudiyaya Ereyga Eebbe.
Ducooyinka iyo heesaha: Waxaan si daacad ah ugu jawaabnaa tukashadeenna xagga Ilaah, si qumman ayaan u toobadkeennaa dembiyadeenna, oo annaguna waxaan ku ammaannaa oo ugu ammaanaannaa farxad iyo maamuus mahadnaq leh.
Ku toosan content
Cibaadada masiixiga waxay ugu horeyn ku saleysantahay nuxurka iyo macnaha oo aan ku salaysnayn shuruudaha rasmiga ama kumeelgaarka ah. Taasi waa sababta cibaadada Masiixiyiintu aan loogu xidhin maalin cayiman oo toddobaad ah ama xilli cayiman. Masiixiyiinta sidoo kale looma baahna inay leeyihiin maalin cayiman ama xilli. Laakiin Masiixiyiintu waxay dooran karaan xilliyo gaar ah oo ay ugu dabaaldegaan heerar muhiim ah nolosha iyo shaqada Ciise.
Sidoo kale, “Kaydso” Masiixiyiinta maalin maalmaha ka mid ah cibaadadooda caadiga ah: waxay isugu yimaadaan sidii jidhka Masiixa oo loo sharfayo Ilaah. Masiixiyiinta badankood waxay doortaan Axadda howlahooda, kuwa kalena waxay doortaan Sabtida, iyo markale in yar oo ka mid ah ayaa soo ururiya waqtiyo kale - tusaale ahaan fiidnimada Arbacada.
Caadiga ah ee barista Seventh-maalin Adventists waa aragtida ah in Masiixiyiintu ay galaan dambi haddii ay doortaan maalinta Axadda inay tahay maalintooda caadiga ah ee cibaadadooda. Laakiin ma jiro wax taageero ah oo tan ku saabsan Kitaabka Quduuska ah.
Dhacdooyinka waa-weyn ee dhacay Axadda Dadbadan oo maalmo-socod ah oo Adventists ah ayaa laga yaabaa inay la yaabaan, laakiin Injiillada ayaa si cad u sheegaya dhacdooyinka waaweyn ee dhacay Axaddii. Waxaan u gali doonnaa tan si faahfaahsan: Masiixiyiinta waajib kuma aha inay qabtaan howlahooda axadda, laakiin sidoo kale ma jiraan wax sabab ah oo aan loogu dooranin Axadda adeegga cibaadada.
Injiilka Yooxanaa wuxuu sheegayaa in xertii Ciise ay kulmeen Axaddii ugu horeysay kadib markii iskutallaabta lagu qodbay Ciise iyo in Ciise u muuqday iyaga (Yooxanaa 20,1). Dhammaan afarta Injiil waxay si joogto ah u soo tebiyeen in sarakiciddii Ciise la soo saaray aroortii hore ee Axaddii (Matayos 28,1; Markos 16,2; Luukos 24,1; Yooxanaa 20,1).
Dhammaan afarta wacdiyeyaashu waxay u arkeen inay muhiim tahay in la xuso in dhacdooyinkan ay dhaceen waqti cayiman, oo ah Axaddii. Waxay sameyn kari lahaayeen haddii aan faahfaahin noocaas ah la helin, laakiin ma aysan sameynin. Injiillada waxay muujinayaan in Ciise isu muujiyey inuu yahay Masiixa sara kacay Axadii - marka hore aroortii, kadibna duhurkii iyo ugu dambeyntii fiidkii. Marka loo eego sawiradan Axad ah ee Ciise soo sarakacay, wacdiyayaashu si kama ah walwal iyo cabsi kama qabaan; halkii, waxay rabeen inay caddeeyaan in waxaas oo dhan dhacay ay dhaheen [maalinta koowaad] ee usbuuca.
Kuwa wali shaki ku jiro maalinta sarakicidda waa inay aqriyaan warbixin aan macquul aheyn oo ku saabsan labada "xerta Emmaus" ee ku jirta injiilka Luukos. Ciise ayaa saadaaliyay in maalinta saddexaad uu kuwii dhintay ka soo sara kici doono (Luukos 9,22; 18,33; 24,7).
Luukos ayaa si cad u sheegay in Axadda - oo ahayd maalintii haweenku ay heleen qabrigii faaruqa ahaa ee Ciise - runtiina waxay ahayd "maalintii saddexaad". Wuxuu si gaar ah farta ugu fiiqay inay haweenku ogaadeen sarakiciddii Ciise subaxa Axadda (Luukos 24,1: 6) in xertii "isla maalintaas" (Luukos 24,13) wuxuu aaday Emmaus iyo inay ahayd "maalintii saddexaad" (Luukos 24,21) waxay ahayd maalintii uu Ciise dhahay inuu soo sara kaco (Luukos 24,7).
Waxaan rabnaa inaan aragno xaqiiqooyin muhiim ah oo wacdiyayaashu inoo sheegeen wax ku saabsan Axadda koowaad ka dib iskutallaabta lagu qodbay Ciise:
Ciise waa laga sara kiciyey kuwii dhintay (Luukos 24,1: 8-13. 21.).
Ciise ayaa loo aqoonsaday markii uu "kibis jejebiyey" (Luukos 24,30: 31-34. 35).
Xertiisii ​​ayaa la kulmay oo Ciise baa u yimid (Luukos 24,15, 36; Yooxanaa 20,1, 19). John wuxuu sheegayaa in xertii ay sidoo kale la kulmeen axadii labaad kadib iskutallaabta la qodbay iyo in Ciise mar kale ku "dhexda" (Yooxanaa 20,26).
Siduu Luukos ugu warramay Falimaha Rasuullada 20,7: 1, Bawlos wuxuu wacdiyey inuu "kibista jebiyo" xubnaha kaniisadda ee Taruas ku taal oo Axaddii la soo ururiyey. 16,2 Korintos Bawlos wuxuu weyddiistay shirkii ku jiray Korintos iyo sidoo kale jameecadihii ku jiray Galatiya (16,1) ugu tabaruc kaniisadda gaajaysan ee Yeruusaalem Axad walba.
Bawlos ma dhahayo waa in kaniisaduhu kulmaan Axadda. Laakiin codsigiisa ayaa muujinaya in isu imaatinnada Axadda aysan ahayn wax aan caadi ahayn. Wuxuu sheegayaa sababta ku-deeqidda toddobaadlaha ah, "si aruurintu aysan u dhicin oo keliya markaan imaado" (1 Korintos 16,2). Haddiise kaniisadaha aysan siin tabarucaadkooda aruurinta toddobaad kasta, laakiin ay lacag ku keydsan lahaayeen guriga, aruurin ayaa wali loo baahnaan lahaa markii rasuul Bawlos yimid.
Qoraalladaani si dabiici ah ayay u akhriyaan si aan u aqoonsanno inaysan ahayn wax aan caadi ahayn Masiixiyiintu inay isugu yimaadaan Axadda, ama wax aan caadi ahayn u ahayn inay "kibis jebiyaan" kulamadooda axadda. (weedh uu Bawlos la xidhiidho cashada Rabbiga; eeg 1 Korintos 10,16: 17).
Markaa waxaan aragnaa in wacdiyayaal wacdiyeyaal ah oo Axdiga Cusuba ah ay doonayaan inay noo sheegaan in Ciise mar kale kacay Axaddii. Iyaguna weligood wax walaac ah kama qabin haddii ugu yaraan qaar ka mid ah mu'miniintu Axaddii isugu soo baxaan inay kibista jebiyaan. Masiixiyiinta si qaas ah looma faray inay isugu yimaaddaan adeegga axadda, laakiin sida tusaalayaashani muujinayaan, dhab ahaan ma jiraan wax sabab ah oo loo yeesho aqoontooda.
Khasaaraha suurtagalka ah
Sida kor lagu soo sheegay, waxaa jira xitaa sababo macquul ah oo Masiixiyiintu isugu yimaadaan maalinta Axada iyagoo ah jirka Masiixa si loogu dabaaldego cilaaqaadka ay la leeyihiin Ilaah. Masiixiyiintu ma inay doortaan Axadda inay tahay maalinta shirka? No. Caqiidada masiixiga kuma salaysna maalmo cayiman, laakiin waxay ku dhisan tahay rumaynta Eebbe iyo wiilkiisa Ciise Masiix.
Waa qalad haddii aad kaliya rabto inaad ku beddesho hal koox oo fasaxyada khasabka ah mid kale. Iimaanka Masiixiyiinta iyo cibaadadu maahan maalmo loo qoondeeyey, laakiin waa ogaanshaha iyo jacaylka Ilaaha Aabbaha ah iyo Rabbigeenna ah Bixiye Ciise Masiix.
Markaan go’aansanno maalinta aan la kulmi doonno rumaystayaasha kale ee cibaadada, waa inaan go'aankeenna ku helnaa sabab macquul ah. Wicitaankii Ciise «Qaado, cun; taasi waa jidhkayga ”iyo“ waxaas oo dhan cab ”ma ku xidhna maalin cayiman. Si kastaba ha noqotee, waxay caado u ahayd Masiixiyiinta aan Yuhuudda ahayn tan iyo bilowgii kaniisaddii hore inay isugu soo baxaan Axadda axadda wehelnimada Masiixa, maxaa yeelay Axadda waxay ahayd maalinta Ciise isu muujiyay inuu ka soo sara kacay kuwii dhintay.
Sharciga Sabtida, iyo dhammaan sharciga Muuse, wuxuu ku dhammaaday dhimashadii Ciise iyo sarakiciddiisa. Ku dhejinta ama isku dayga inaad u isticmaasho qaab kale oo ah Sabtida Sabtida micnaheedu waa daciifinta muujinta Ilaah ee ku saabsan Ciise Masiix, kaasoo ah dhammaystirka ballanqaadyadiisa oo dhan.
Aaminaadda ah in Eebbe ka doonayo Masiixiyiintu inay dhawraan Sabtida ama ku qasba inay adeecaan Sharciga Muuse waxay la macno tahay inaan Masiixiyiintu si buuxda unan helin farxadda uu Eebbe doonayo inuu na siiya Masiixa. Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan aaminno shaqadiisa badbaadada oo aan isaga ku helno nabad iyo raaxo. Badbaadadeenna iyo noloshuba waxay ku jiraan nimcadiisa.
Waxaan mararka qaarkood helnaa warqad taasoo qoraagu ku muujinayo sida ay uga xun yihiin in aan su'aal ka qabno aragtida ah in Sabtida toddobaadlaha ahi ay tahay maalinta Ilaahay ee Masiixiyiinta. Waxay cadeynayaan in waxkastoo qof u sheego, ay adeeci doonaan "Ilaah dadkaba".
Dadaalka lagu sameynayo waxa la rumeysan yahay inuu yahay doonista Eebbe waa in la aqoonsadaa; waxa runtii marin habaabin ah waa waxa Eebbe runtii inaga rajeeyo. Rumaysadka adag ee Sabatariyiinta ayaa ah in addeecidda Ilaah ay ka dhigan tahay isdaahirinta sabtiga toddobaadlaha ah waxay caddaynaysaa jahwareerka iyo khaladaadka Sabatariyiinta ay u horseedeen Masiixiyiinta taxaddarka.
Dhinac, barbarashada reer Sabatariani waxay ku dhawaaqeysaa faham aan kitaab lahayn oo ku saabsan waxa ay ka dhigan tahay addeecista Ilaah, dhinaca kalena waxay fahamka adeeciddan ka dhigaysaa go’aaminta go'aaminta aaminnimada Masiixiyiinta. Natiijadu waxay tahay in fikir iska hor imaad ah - "annaguna aan ka horjeedno kuwa kale" - uu soo saaray, fahamka Ilaah ee keena kala-goynta jidhka Masiixa maxaa yeelay qofku wuxuu moodayaa in qofku u hoggaansamo amar ah in, sida ku xusan barista Axdiga Cusubi, aan ansax ahayn.
Xushmadda aaminka ah ee Sabtida toddobaadlaha ah maahan su'aal addeecidda Ilaah maxaa yeelay Ilaah kama doonayo Masiixiyiintu inay quduus ka dhigaan Sabtida toddobaadlaha ah. Ilaah wuxuu ina weydiiyaa inaan isaga jeclaano, oo jacaylka aan u qabno Ilaah lagu go'aaminayo ilaalinta Sabtida toddobaadlaha ah. Waxaa lagu go'aamiyaa aaminaaddeena xagga Ciise Masiix iyo jacaylka aan u qabno dadka kale ee aadanaha ah (1 Yooxanaa 3,21: 24-4,19; 21). Baybalku wuxuu leeyahay axdi cusub iyo sharci (Cibraaniyada 7,12:8,13; 9,15;).
Waa khalad in macallimiinta kiristaanka ahi ay u isticmaalaan Sabtiga asbuuca usbuuc ahaan sidii camal fidinta caqiidada masiixiga. Caqiidada ah in sharciga sabtida uu kuxiro galo Masiixiyiinta wuxuu culeyska saarayaa damiirka masiixiga iyo cadaalad sharciyeed burbur leh, wuxuu qarinaayaa runta iyo awooda injiilka, wuxuuna sababa kala qeybinta jirka Masiixa.
Baybalku wuxuu leeyahay Ilaahay wuxuu dadka ka rajeynayaa inay rumaystaan ​​oo jeclaadaan injiilka (Yooxanaa 6,40; 1 Yooxanaa 3,21-24; 4,21; 5,2). Farxada ugu weyn ee dadku la kulmi karaan waa inay gartaan oo jeclaadaan Rabbigooda (Yooxanaa 17,3), oo jacaylkan laguma qeexin ama dhiirigelin iyadoo la arkaayo maalin cayiman oo toddobaad ah.
Nolosha masiixiga waa nolol aamin ah oo ku jirta farxadda Bixiyaha, nasashada rabbaani ah, waa nolol ay qayb walba oo nolosha ka mid ah u go'ay tahay Ilaah wax walbana waa ficil lagu caabudo. Abuuritaanka u fiirsashada sabtida inay tahay wax qeexaya "run" Masiixiyaddu waxay ka dhigan tahay in qofku lumiyo wax badan oo ka mid ah farxadda iyo xoogga runta, in Masiixu yimid, iyo in Ilaah ku jiro isaga dhammaan kuwa rumeysan injiilka. axdi cusub (Matayos 26,28; Cibraaniyada
9,15) (Rooma 1,16:1; 5,1 Yooxanaa).
Sabtiga usbuuclaha ah waxay ahayd hooska - muuqaal - xaqiiqada weli soo socota (Kolosay 2,16: 17). Ku haynta tilmaantan marwalba ay lama huraan tahay micnaheedu waa beeninta runta ah in xaqiiqadan ay mar hore jirto oo la heli karo. Mid ayaa laga xayuubiyey kartida uu uheli karo farxad aan kala go 'lahayn oo kusaabsan waxa runtii muhiim ah.
Waxay lamid tahay inaad rabto inaad ka dhigto ogeysiiska ku-biiritaankaaga oo aad ku raaxaysato ka dib markii aroosku dhacay. Taa baddalkeed, waa waqtigii ugu weynaa in la siiyo ahmiyadaha lammaanaha isla markaana u ogolaato kaqeybgalida asalka inay noqoto xusuus wacan.
Goobta iyo waqtiguba ma aha kuwa diirada lagu saarayo cibaadada dadka Ilaah. Cibaadada saxda ah, ayuu yiri Ciise, wuxuu ku dhacaa ruux iyo run (Yooxanaa 4,21-26). Qalbigu waa ruux. Ciise waa runta.
Markii Ciise la weydiiyay, "Maxaan samaynaa si aan u qabanno shaqada Ilaah?" Wuxuu ku jawaabay: "Tani waa shaqadii Ilaah ee aad rumaysay kii uu soo diray." (Yooxanaa 6,28-29). Taasi waa sababta cibaadada Masiixiyiintu ay ugu horreyn u tahay Ciise Masiix - oo ku saabsan aqoonsigiisa inuu yahay wiilka weligiis ah ee Ilaah iyo shaqada uu u qabo Sayid, Bixiye iyo Macallin.
Ilaahbaa ka raalli ah?
Qof kasta oo rumeysta in u hoggaansanaanta sharciga Sabtida uu yahay qodobka go'aamiya badbaadadeenna ama cambaareynta xukunka ugu dambeysa ayaa fahma labada - dembiga iyo nimcada Ilaah. Haddii Sabtida Sabtida ay tahay dadka keliya ee la badbaadiyo, markaa Sabtida waa qiyaasta xukunka lagu fuliyo, ma aha Wiilka Ilaah ee dhintay oo ka soo sara kacay kuwii dhintay badbaadadeenna.
Sabatariyiinta waxay rumeysan yihiin in Eebbe ka raalli yahay midka daahiriya Sabtida marka loo eego kan aan quduus ka dhigin. Laakiin sababtani kama timaado Kitaabka Quduuska ah. Baybalku wuxuu barayaa in Sharciga Sabtida, sida sharciga Muuse oo dhan, in kor loo qaaday loona koray heer sare xagga Ciise Masiix.
Sidaa darteed, haddii aan dhawro Sabtida, micnaheedu maahan "farxad weyn" xagga Ilaah. Sabtida lama siin Masiixiyiinta. Muhiimka burburka ee fiqiga sabtida ayaa ah ku adkaysiga in Sabbatarians yihiin keli ah run oo rumaystayaal Masiixiyiin ah, taas oo macnaheedu yahay in dhiigga Ciise uusan ku filnayn badbaadinta dadka ilaa maalinta Sabtida aan lagu darin.
Baybalku wuxuu ka hor imanayaa caqiiddada qaldan ee aayadaha badan ee macnaha leh: Waxaa laga soo furtay nimcadii Eebbe, kaliya waxaan rumeysannahay dhiiga Masiixa oo aan wax shaqo ah ku jirin. (Efesos 2,8-10; Rooma 3,21-22; 4,4-8; 2 Timoteyos 1,9; Tiitos 3,4-8). Bayaanadan cad ee ah Masiixa oo keli ah ee uusan aheyn sharcigu waa mid go'aan u ah badbaadadeenna si cad ayey uga soo horjeeddaa caqiidada sabtida ee ah in dadka aan sabtida quduus ka dhigeyn karin badbaadada.
Celceliska sabtida ninku wuxuu aaminsan yahay inuu ka cibaado badan yahay qof aan ilaalin sabtida. Aynu eegno weedhaha soo socda qoraalladii hore ee WKG:
"Laakiin kaliya kuwa sii wada raacitaanka awaamiirta Ilaah ee ah inay dhawraan Sabtida ayaa ugu dambayn galaya 'nasashada' sharaf leh ee Boqortooyada Ilaah oo waxay heli doonaan hadiyadda nolosha weligeed ah ee ruuxa." (Koorsada Fariimaha Qoraalka ee Ambassador College, Casharka 27aad ee 58, 1964, 1967).
"Qof kasta oo aan dhawrin sabtida ma qaadi doono 'calaamada' sabtida rabbaaniga ah oo lagu xusayo dadka Ilaah, oo sidaas darteed ma noqon doonto wax ku dhaca Ilaah markuu Masiixu soo noqonayo!" (ibid., 12).
Sida xigashooyinkani tilmaamayaan, Sabtida looma tixgelin oo keliya rabitaanka Ilaah, laakiin waxaa sidoo kale la rumeysan yahay in qofna aan la badbaadin doonin haddii uusan Sabtida ahayn quduus.
Xigashada xigasho ee suugaanta Adventist-ka maalintii toddobaad:
“Macnaha guud ee doodan qadiimiga ah, adeegga kaniisadda ee maalinta Axadda ugu dambeyntii waxay noqotaa astaamo lagu garto, halkan calaamad xayawaan ah. Shaydaanku wuxuu soo sara kiciyey Axadda taas oo calaamad u ah xooggiisa, halka sabtiguna ay noqon doonaan imtixaanka weyn ee aaminka u ah Ilaah. Halgankaas wuxuu u kala qaybin doonaa masiixiga laba xero oo wuxuu go'aamin doonaa waqtiyada ugu dambeysa ee iskahorimaadka ah ee dadka Ilaah » (Don Neufeld, Seventh Day Adventist Encyclopedia, dib u eegis 2aad, mugga 3). Xigashada ayaa caddaynaysa fikradda toddobaad ee Adventist ee ah in dhawritaanka Sabtida ay tahay go’aaminta go'aaminta cidda runtii rumeysan Eebe iyo kan aan rumayn, fikrad ka dhalata isfaham darrada aasaasiga ah ee waxbarista Ciise iyo rasuulladu, waa fikrad ah dhiirigaliyaa dabeecadda sare ee ruuxiga ah.
Fiqi Sabtida waxay ka soo horjeeddaa nimcada Ilaah ee ku jirta Ciise Masiix iyo farriinta cad ee Baybalka. Sharciga Muuse, oo ay ku jiraan Sharciga Sabtida, waxaa loogu talagalay dadka Israa'iil oo aan loogu talagalay Kaniisadda Masiixiga. In kasta oo Masiixiyiintu ay tahay inay xor u ahaadaan inay caabudaan Ilaah maalin kasta oo toddobaadle ah, ma aha inaanu khalad sameynno rumeynta inay jirto sabab kasta oo kitaabiga ah oo loo doorto Sabtida inay tahay maalinta kullanka maalinka kale.
Waxaan ku soo koobi karnaa arrimahan oo dhan sida soo socota:
Waxay ka soo horjeedaa barista kitaabiga ah ee sheegashada in sabtida toddobaad ay ku xiran tahay Masiixiyiinta.
Waxay ka soo horjeedaa waxbarista kitaabiga ah ee sheegashada in Ilaah aad ugu faraxsan yahay dadka sabtida quduus ka dhiga kuwa aan diidi karin, ha ahaato Maalinta toddobaad iyo Sabtida.
Waxay ka soo horjeedaa barista kitaabiga ah ee sheegashada in maalin ka mid ah maalinta shirku ay tahay mid ka sii badan ama ka rabaani ah kaniisada kaniisadda.
Waxaa jira dhacdo udub dhexaad ku ah injiilka oo dhacay maalin Axad ah, waana tan aasaaska u ah dhaqanka Masiixiyada inay isu soo urursadaan cibaadada maalintaas.
Sarakiciddii Ciise Masiix, oo ah Wiilka Ilaah, kan noo yimid inuu inaga furto, ayaa aasaas u ah iimaankeenna. Sidaa darteed, cibaadada axadda waa mid ka tarjumeysa aaminsanaanta injiilka. Si kastaba ha noqotee, cibaadada bulshada maalinta axada looma baahna, sidoo kale cibaadada maalinta axada looma sameeyo Masiixiyiintu inay ka sii quduus ahaadaan ama Ilaah jecel yahay kulanka ka kale maalinta kale ee usbuuca.
Caqiidada Sabtida waxay ku xiran tahay Masiixiyiintu waxay keenaysaa waxyeelo xagga ruuxa ah sababtoo ah waxbarista noocan ahi waxay ka horimaanaysaa Qorniinka waxayna khatar gelisaa midnimada iyo jacaylka ku jira jidhka Masiixa.
Waa waxyeello xagga ruuxa ah in la aamino oo la baro in Masiixiyiintu ay isugu yimaadaan Sabti ama Axad sababta oo ah baridaas waxay u dhigantaa maalinta cibaadada inay tahay caqabadda sharciga ee laga gudbo in laga soo celiyo.
Mid ka mid fikirka ugu dambeeya
Anagoo ah raacayaasha Ciise, waa inaan baranaa inaan midkeenna midka kale u xukumno xulashooyinka aan sameysanno Ilaah hortiisa iyadoo loo eegayo damiirkayaga. Waana inaan si daacadnimo ah nafteena ugu sheegaa sababaha ka dambeeya go'aanadeena. Sayid Ciise Masiix wuxuu rumaystayaasha ku soo celiyey nasashadiisa rabbaaniga ah, isagoo nabad kula jira nimcada Ilaah oo buuxda. Dhammaanteen, sida Ciise amray, aan ku koraan jacaylka midba midka kale u jeclaado.